အရွယ်မရောက်မီ စစ်မှုထမ်းဆောင်နေသူ ကလေးသူငယ်နှင့် လူငယ် (၇၅)ဦးအား မြန်မာ့တပ်မတော်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြု | UNIC Yangon
အရွယ်မရောက်မီ စစ်မှုထမ်းဆောင်နေသူ ကလေးသူငယ်နှင့် လူငယ် (၇၅)ဦးအား မြန်မာ့တပ်မတော်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြု
ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၃၁)ရက် – မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရမှ တပ်မတော်တွင် အရွယ်မတိုင်မီ စစ်မှု ထမ်းဆောင်နေသည့် ကလေးသူငယ် (၇၅)ဦးအား ယနေ့နှုတ်ထွက်ခွင့် ပြုလိုက်သည်။ ယခု နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်းသည် ၂၀၁၈ခုနှစ်အတွင်း ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ကိုက်ညီကာ ကလေးသူငယ်များအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသည် အရေးကြီးကြောင်း ထင်ရှားစေပါသည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ ကုလသမဂ္ဂနှင့်အတူ ပူးတွဲ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစီမံချက် (Joint Action Plan)ကို စတင် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသည့် အချိန်မှ ယနေ့အထိ ကလေးသူငယ်နှင့် လူငယ်စုစုပေါင်း (၉၂၄)ဦးကို တပ်မတော်က နှုတ်ထွက်ခွင့် ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်းကို ‘ကလေးသူငယ်များအား တပ်မတော်အတွင်း ဝင်ရောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်စေခြင်းနဲ့ အသုံးပြုခြင်းမှ တားဆီးရပ်တန့်သွားဖို့ နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်မှု ဖြစ်တဲ့အတွက် အပြုသဘော ဆောင်သည့် တိုးတက်မှု နောက်တစ်ခု’ အဖြစ် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကြီးလေးသောချိုးဖောက်မှုများအား စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့် အစီရင်ခံတင်ပြရေး နိုင်ငံအလိုက် အထူးတာဝန်အဖွဲ့(CTFMR)၏ ပူးတွဲဥက္ကဌများ ဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူး Knut Ostbyနှင့် ယူနီဆက်မှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် June Kunugiတို့က ဝမ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုလိုက်ကြသည်။
နှုတ်ထွက်ခွင့်ရရှိသည့် ကလေးသူငယ်များနှင့် လူငယ်များသည် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်သွားမည် ဖြစ်သည့်အတွက် သာမန်အရပ်သားဘဝကို ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကာ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်သာမက နိုင်ငံသားကောင်းများအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိပြီး အဓွန့်ရှည်ရန် လုပ်ဆောင်ရာမှာ ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါသည်။
ဗဟိုထိန်းချုပ်စနစ်ဖြင့် တပ်မတော်စစ်သားစုဆောင်းရေး လုပ်ငန်းများအတွင်း အသက်စိစစ်ရေး လုပ်ဆောင်မှုများအား တွန်းအားပေး လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် CTFMR က ချီးကျူးလိုက်ရပြီး ယခုကဲ့သို့ အရေးပါသည့် ကာကွယ်တားဆီးရေးနည်းစနစ်ကို နောင်တွင်လည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန် တိုက်တွန်း လိုက်ရသည်။ ပူးတွဲလုပ်ငန်းစီမံချက်ကို သဘောတူလက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ ၂၀၁၅ခုနှစ် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွင် ပါဝင်ပက်သက်နေသည့် ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲ အခြေပြစာချုပ်အား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း (အတည်ပြု ရေးထိုးရန်ကျန်ရှိ)၊နှင့် ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ အခြေအနေများနှင့် ဆက်စပ်နေသော ကလေးသူငယ်များအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရေး ပဲရစ်ကတိကဝတ်နှင့် ကျင့်ဝတ်များအား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းစသည့် အရေးကြီးလုပ်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ(၂၁ရာစုပင်လုံ) တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကြီးလေးသောချိုးဖောက်မှုများအား တားဆီးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အရေးပါသည့်ကဏ္ဍတခုအဖြစ် ပါဝင်ကြောင်းကို ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ သဘောတူညီချက်စာချုပ်နှင့်အညီ ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးများ ခိုင်မာစေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ကြီးလေးသောချိုးဖောက်မှုအချက် ခြောက်ရပ်အား ဖယ်ရှားရှင်းလင်းသွားရန်လုပ်ငန်းများအား ကတိကဝတ်ပြုခြင်းအားဖြင့် မီးမောင်းထိုးပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကလေးသူယ်များအား တပ်မတော်အတွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်စေခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းတို့မှ တားဆီး ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်များအား စနစ်ကျစွာရေရှည်လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ရန် CTFMRသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်အတူ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။ လုပ်ဆောင်ရန် ကျန်ရှိနေသည့် လုပ်ငန်းနည်းစနစ်များအတွက် မူဘောင်များခိုင်မာစေရန် လုပ်ဆောင်ရာတွင် အခွင့်အလမ်းသစ်များ ဖြစ်သည့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး ဥပဒေပြဌာန်းခြင်း၊ အသက်အရွယ် တိကျစွာသိရှိနိုင်ရန် လုံလောက်သည့် အထောက်အထား အချက်အလက်များမရှိသည့် ကလေးငယ်များအား “benefit of the doubt” – “သံသယအကျိုးခံစားခွင့်” စနစ်ဖြင့် စနစ်တကျ ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခွင့်တို့ပါဝင်သည်။
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ကလေးသူငယ်နှင့်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ အထူး ကိုယ်စားလှယ် Ms Virginia Gamba၏ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မေလ၌ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့သည့် ခရီးစဉ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၊ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများနှင့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ စာရင်း၌ ပါဝင်နေသည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ သုံးဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အသက်မပြည့်မီ စုဆောင်းတာဝန်စေခိုင်းမှုများနှင့် ကလေးသူငယ်များအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမို ခိုင်မာလာစေရန် CTFMRမှ ယင်းစာရင်းထဲတွင် ပါဝင်နေသည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ခုနှစ်ဖွဲ့ဖြင့် ပူးပေါင်း ကတိကဝတ်ပြုမှု လုပ်ဆောင်နေမှုများအကြောင်းကို သူမအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရအား တင်ပြခဲ့သည်။ ကလေးသူငယ်များအား သက်ဖြတ်မှု၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု၊ အဓမ္မကျင့်ကြံမှုနှင့် အခြား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများ တွေ့ရှိရခြင်းကြောင့် ယင်းစာရင်းထဲတွင် ပါဝင်နေသေးသည့် တပ်မတော်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကြီးလေးသောချိုးဖောက်များ ပေါ်ထွက် လာနေသေးမှုများကြောင့် လွန်စွာ စိုးရိမ်ပူပန်မိကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းချိုးဖောက်မှုများအား နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ရန် နည်းစနစ်များအား စတင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားရန် CTFMR မှ တိုက်တွန်းလိုက်ရပြီး ၎င်းအနေဖြင့်လည်း အစိုးရအား ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဟု ကတိပြုကြောင်း ပြသလိုက်သည်။
CTFMRသည် လုပ်ငန်းစီမံချက်အား အောင်မြင်တည်တံ့စွာပြီးဆုံးသွားနိုင်ရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် တပ်မတော်အတွင်း ကလေးသူငယ်များ တာဝန်ထမ်းဆောင်စေမှုများမှ တားဆီးကာကွယ်သွားရန်လည်း လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ စာရင်း၌ ပါဝင်နေသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် “အရွယ်မရောက်သေးသူများ စုဆောင်းခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းများ ပြုလုပ်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ” –
၂. ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့  Kachin Independence Army (KIA)
၃. ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့  Karen National Liberation Army (KNLA)
၄. ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ Karen National Liberation Army Peace Council
၅. ကရင်နီတပ်ဖွဲ့ Karenni Army (KA)
၆. ရှမ်းပြည်နယ် တပ်ဖွဲ့ တောင်ပိုင်း Shan State Army South (SSA-S)
၇. ”ဝ” ပြည်နယ် ညီညွတ်ရေး တပ်ဖွဲ့ United Wa State Army (UWSA)
CTFMR နှင့် စပ်လျဉ်း၍ နောက်ခံအချက်အလက်
လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ၌ ပါဝင်သောအဖွဲ့အစည်း (တပ်မတော် နှင့်/သို့မဟုတ် လက်နက်ကိုင် အုပ်စုများ) က ကလေးသူငယ်များအပေါ် ကြီးလေးသောချိုးဖောက်မှုများ ကျူးလွန်သည်ဟု စစ်ဆေး အတည်ပြုပြီး သက်သေအထောက်အထား တွေ့ရှိရသော နိုင်ငံများတွင် ကုလသမဂ္ဂက ဦးဆောင်သော CTFMR တည်ထောင်ရန် ကုလသမဂ္ဂနှင့် အခြား ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့အစည်းများအား ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ် ၁၆၁၂အရခွင့်ပြုထားပါသည်။ CTFMR ၏ တာဝန်မှာ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့် အစီရင်ခံတင်ပြရေးအစီအမံ(MRM) တည်ထောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွင် ကလေးသူငယ်များအား တပ်သားအဖြစ်စုဆောင်းခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း အပါအ၀င် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများ ကြီးလေးသောချိုးဖောက်မှုများအား မှတ်တမ်းပြုစုခြင်း၊ စစ်ဆေး အတည်ပြုခြင်းနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီသို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။
လုံခြုံရေးကောင်စီသို့ အစီရင်ခံတင်ပြသည့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကြီးလေးသော ချိုးဖောက်မှု (၆) ရပ် –
ကလေးသူငယ်များကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း (သို့) သတ်ဖြတ်ခြင်း
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများတွင် ကလေးသူငယ်များကို တပ်သားအဖြစ် ခေါ်ယူစုဆောင်း အသုံးပြုခြင်း
စာသင်ကျောင်း (သို့) ဆေးရုံများကို တိုက်ခိုက်ခြင်း
အတင်းအဓမ္မပြုကျင့်ခြင်း (သို့) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခြင်း
ကလေးသူငယ်များအတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများမရောက်ရှိအောင် တားဆီးခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
CTFMRမှ ကြီးလေးသည့်ချိုးဖောက်မှုများကို ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်လျက် တုံ့ပြန်ရန်လည်း လုပ်ပိုင်ခွင့် အပ်နှင်းခြင်း ခံထားရပါသည်။ CTFMR ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၇ခုနှစ်က တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့် ယူနီဆက်မြန်မာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်တို့က ပူးတွဲဥက္ကဌများအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ CTFMR အဖွဲ့တွင် ကုလအဖွဲ့များဖြစ်သည့် UN RCO, UNICEF, ILO, UNFPA, UNHCR, UNOCHA, နှင့် WFP စသည့်အဖွဲ့များနှင့် World Vision၊ Save the Children တို့ ပါဝင်ပါသည်။
၂၀၁၃ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ယူနီဆက်အနေဖြင့် တပ်မတော်တွင်ကလေးသူငယ်များကို တပ်သားအဖြစ် ခေါ်ယူစုဆောင်း အသုံးပြုခြင်းကို အဆုံးသတ်ရေးအတွက် ၎င်းတို့၏ တာဝန်ယူမှုကို ပြည်သူလူထုအကြား အသိတရား နှိုးဆော်ပေးရန်အတွက် နိုင်ငံအနှံ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် CTFMRအဖွဲ့ကိုယ်စား ယူနီဆက်နှင့် World Vision တို့က ကလေးသူငယ်များကို တပ်မတော်မှ တပ်သားအဖြစ် ခေါ်ယူစုဆောင်းသည့် မသင်္ကာဖွယ်ကိစ္စရပ်များ တွေ့မြင်ရပါက မည်သူမဆို ဆက်သွယ်အကြောင်းကြား သတင်းပို့နိုင်မည့် အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ခေါ်ယူ အကြောင်းကြားနိုင်မည့် ဖုန်းလိုင်း နှစ်လိုင်း (၀၉-၄၂၁၁၆၆၇၀၁ နှင့် ၀၉-၄၂၁၁၆၆၇၀၂) ကို တပ်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက အောက်ပါအတိုင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် –
 ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှ လုပ်ငန်းစီမံချက်အရ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခဲ့သော ငယ်ရွယ်သူအားလုံးမှာ တပ်မတော်က တပ်သားအဖြစ် စုဆောင်းခဲ့ချိန်တွင် အသက် ၁၈ နှစ် မပြည့်သေးပါ။
← Seventy-five (75) children and young people released by the Myanmar Armed Forces Comment by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet on the conviction of two Reuters journalists in Myanmar, →